समायोज्य बिजुली आपूर्ति: यो के हो, यो कसरी काम गर्दछ, यो के को लागी | नि: शुल्क हार्डवेयर
इसहाक | 14/09/2021 09:00 | इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू
कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स स्टुडियो वा कार्यशाला को लागी सबैभन्दा बहुमुखी र आवश्यक वस्तुहरु मध्ये एक हो dimmable विद्युत आपूर्ति। यसको साथ तपाइँ सर्किट को सबै प्रकार को खुवाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न भोल्टेज र तीव्रता कि सजिलै संग विनियमित लागू गर्न को लागी सक्षम। त्यसैले तपाइँ अरुको बारेमा बिर्सन सक्नुहुन्छ ब्याट्री वा एडेप्टर प्रत्येक सर्किट को लागी विशिष्ट।
una बिजुली आपूर्ति तपाइँको सबै परियोजनाहरु को लागी सार्वभौमिक। यसको अतिरिक्त, यो न केवल एक सर्किट शक्ति को लागी प्रयोग गरीन्छ, तपाइँ यसलाई एक परीक्षण उपकरण को रूप मा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाइँ देख्न सक्नुहुनेछ यदि एक कम्पोनेन्ट वा सर्किट ठीक तरिकाले काम गर्दछ जब तपाइँ यसलाई यसको जांच को सुझावहरु संग छुनुहोस् ...
1 एक dimmable विद्युत आपूर्ति के हो?
1.1 कसरी एक राम्रो dimmable फन्ट छनौट गर्न को लागी
2 राम्रो dimmable बिजुली आपूर्ति
एक dimmable विद्युत आपूर्ति के हो?
एक बिजुली आपूर्ति के हो, र संचालन को सिद्धान्तहरु मा, हामी पहिले नै यस ब्लग मा टिप्पणी गरिसकेका छौं। जे होस्, जब यो एक को लागी आउँछ dimmable विद्युत आपूर्ति, यो परम्परागत संग एक सानो फरक छ।
एक बिजुली आपूर्ति एक सर्किट वा कम्पोनेन्ट बिजुली ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्षम एक उपकरण हो। ठिक छ, जब एक dimmable स्रोत को बारे मा कुरा गर्दै, यो एक हो जसमा भोल्टेज एक निश्चित दायरा भित्र समायोजित गर्न सकिन्छ, र यहाँ सम्म कि धाराहरु। तेसैले तपाइँ 3v3, 5v, 12v, आदि को एक निश्चित आउटपुट छैन, तर तपाइँ कुन शक्ति तपाइँलाई आवश्यक छ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी एक राम्रो dimmable फन्ट छनौट गर्न को लागी
एक राम्रो dimmable बिजुली आपूर्ति छनौट गर्न को लागी, तपाइँ कारकहरु को एक नम्बर मा भाग लिनु पर्छ तपाइँले विचार गर्नु पर्छ। तेसैले तपाइँ उत्पादन कि राम्रो संग तपाइँको आवश्यकताहरु लाई सूट किन्न सक्नुहुन्छ:
बजेट: पहिलो कुरा तपाइँ तपाइँको समायोज्य बिजुली आपूर्ति मा कति पैसा खर्च गर्न चाहानुहुन्छ, यो तरीका बाट तपाइँ मोडेल को एक विशिष्ट दायरा मा जान सक्नुहुन्छ र तपाइँको संभावनाहरु बाट बाहिर छ कि सबै कुरा हटाउन सक्नुहुन्छ।
आवश्यक छअर्को कुरा यो निर्धारित गर्न को लागी तपाइँ तपाइँको dimmable बिजुली आपूर्ति को उपयोग गर्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ, यदि यो सामयिक निर्माता वा DIY परियोजनाहरु को लागी हो, वा यदि यो एक अधिक पेशेवर प्रयोगशाला को लागी हो, एक इलेक्ट्रोनिक्स कार्यशाला मा पेशेवर उपयोग को लागी, आदि। यो पनि निर्धारण गर्दछ यदि तपाइँ केहि अधिक विश्वसनीय र महँगो आवश्यक छ, वा यदि तपाइँ एक सरल संग सामग्री हुन सक्नुहुन्छ।
ब्रान्ड: त्यहाँ धेरै ब्रान्डहरु छन् कि बाँकी मा बाहिर खडा छन्। तर तपाइँ या त यो संग पागल हुनु हुँदैन। सँधै, यदि यो एक अधिक प्रसिद्ध ब्रान्ड हो, तपाइँ केहि गुणस्तरीय र राम्रो समर्थन को ग्यारेन्टी हुनेछ यदि केहि हुन्छ।
प्राविधिक विशेषताहरु: यो धेरै व्यक्तिगत हो, र यो तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ। तर सोच्नुहोस् कि भोल्टेज र धाराहरु को दायरा तपाइँ सामान्यतया चाहिन्छ, फिट गर्न को लागी। समर्थित शक्ति (W) पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
राम्रो dimmable बिजुली आपूर्ति
तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने एक राम्रो dimmable बिजुली आपूर्ति, यहाँ तपाइँ सबैभन्दा सिफारिश मोडेल र ब्रान्ड को केहि देख्न सक्नुहुन्छ:
पीकटेक १५२५: dimmable बिजुली आपूर्ति को एक धेरै विश्वसनीय र शक्तिशाली ब्रान्ड हो। यो मोडेल प्रत्यक्ष वर्तमान को 1-16 भोल्ट बाट जान सक्नुहुन्छ, र तीव्रता मा 0-40A बाट, यद्यपि त्यहाँ अन्य महँगो मोडेलहरु छन् कि 60A सम्म पुग्न सक्छन्। यो एक एलईडी स्क्रिन जहाँ तपाइँ वर्तमान भोल्टेज र वर्तमान मूल्यहरु पढ्न सक्नुहुन्छ, साथै प्रशंसकहरु को उपयोग गरेर एक बुद्धिमान शीतलन प्रणाली, र3सम्भव presets गर्न सक्नुहुन्छ।
Baugger Wanptek Nps1203W: 0-120v डीसी, र 0-3A को एक उत्पादन क्षमता संग, समायोज्य स्रोत को सबै भन्दा राम्रो मोडेल को एक। एक डिजिटल प्रदर्शन को साथ सटीक आपूर्ति मूल्यहरु, कम्प्याक्ट आकार, सुरक्षित, र सरल म्यानुअल नियन्त्रण संग हेर्न को लागी सक्षम हुन को लागी।
COODEN कुञ्जी: यो एक साधारण समायोज्य बिजुली hobbyists र प्रयोगशालाहरु, र यहाँ सम्म कि शैक्षिक केन्द्रहरु द्वारा घर को उपयोग को लागी उपयुक्त छ। यो आपूर्ति मूल्यहरु लाई हेर्न को लागी एक डिजिटल प्रदर्शन, र 0-30 भोल्ट र प्रत्यक्ष वर्तमान को 0-10 amps बाट विनियमित गर्न सकिन्छ।
युनिरोई डीसी: यो स्रोत0बाट 32 भोल्ट, र0देखि 10.2 amps सम्म एक समायोजन को अनुमति दिन्छ। 0.01v र 0.001A को एक समायोज्य परिशुद्धता संग। ठूलो, कम्पैक्ट एलईडी प्रदर्शन, बुद्धिमान तापमान नियन्त्रण, र धेरै विश्वसनीय संग।
RockSeed RS305P: 0-30V, र 0-5A को समायोजन क्षमता संग एक समायोज्य बिजुली आपूर्ति। एक ४ अंक,-सेट एलईडी डिस्प्ले, उन्नत सेटिंग्स, मेमोरी, र एक USB केबल को माध्यम बाट एक पीसी मा जडान गर्न को लागी विन्डोज मात्र मिल्दो सफ्टवेयर संग इन्टरफेस गर्न को लागी क्षमता संग।
Hanmatek HM305: अघिल्लो एक जस्तै फन्ट, एक अधिक कम्पैक्ट, सरल र सस्तो आकार संग। वर्तमान र भोल्टेज मानहरु लाई हेर्न को लागी एलईडी स्क्रीन शामिल छ। यो 0-30V र 0-5A को बीच वर्तमान बीच भोल्टेज को एक सजिलो समायोजन अनुमति दिन्छ। त्यहाँ अन्य भेरिएन्टहरु छन् कि १० ए सम्म जान सक्छन्।
Kaiweets सीसी: यो अन्य मोडेल एक सीधा वर्तमान आपूर्ति संग र उत्पादन को नियमन को लागी महान परिशुद्धता संग, सबै भन्दा राम्रो को बीच मा पनि छ। यो0देखि 30V र0देखि 10A सम्म जान सक्छ। यसमा एलईडी डिस्प्ले र ५ वी / २ ए पावर युएसबी पोर्ट पनि छ।
कार्यक्रमयो त्यहाँ बाहिर dimmable बिजुली आपूर्ति को सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड मध्ये एक हो, र यसको मूल्य धेरै आकर्षक छ। यो मोडेल0देखि 30 भोल्ट, र0देखि 10 amps सम्म विनियमन अनुमति दिन्छ। एक ठूलो4अंक एलईडी प्रदर्शन, कम्पैक्ट आकार, धेरै विश्वसनीय र सुरक्षित, र एलीगेटर केबलहरु / परीक्षण लाइनहरु संग संगै।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » समायोज्य बिजुली आपूर्ति: यो के हो, यो कसरी काम गर्दछ, यो के को लागी हो
चुम्बकीय पेंच ट्रे: अज्ञात र व्यावहारिक उपकरण